မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှု လုပ်ငန်းရှင်များ အသင်း (MRCCI) ကို ၁၉၉၁ခုနှစ်၊ ဇွန်လ (၂၆) ရက်နေ့တွင် စတင်ဖွဲ့စည်းခဲ့ပြီး သက်တမ်းအားဖြင့် (၂၂) နှစ် ရှိခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါသည်။ ယခုအချိန်တွင် အသင်းသား ဦးရေပေါင်း (၂၀၁၆)ဦး ရှိပြီး၊ . . .
MRCCIနှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တက်ဟုန်းပြည်နယ်ခွဲကုန်သည်ကြီးများအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံ...
Written on 11/03/2019, 18:33
မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MRCCI) နှင့် တရုတ်ပြည်သူ့သမ္မတနိုင်ငံ တက်ဟုန်းပြည်နယ်ခွဲကုန်သည်ကြီးများအသင်း...
Written on 06/03/2019, 17:23
MDYITFBF 2019 - working committee's meeting5March 2019 (2:00 PM) #mdyitfbf2019 “၂၀၁၉ ခုနှစ် မတ်လ ၂၃ ရက်မှ ၂၅ ရက်နေ့၊ Mandalay Convetion...
MRCCI နှင့် တက်ဟုန်းပြည်နယ်ခွဲကုန်သည်ကြီးများအသင်း (မြန်မာနိုင်ငံကိုယ်စားလှယ်ရုံး)တို့...
Written on 25/02/2019, 16:33
၂၀၁၉ ခုနှစ် ဖေဖေါ်ဝါရီလ ၂၅ ရက်နေ့၊ Golden Hotel တွင် မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီး ကုန်သည်များနှင့် စက်မှုလက်မှုလုပ်ငန်းရှင်များအသင်း (MRCCI) နှင့်...
Written on 22/02/2019, 17:50
Vacancy Announcement We are hiring! Job Title : Business Development Manager (1 Post) Job Requirements • Only Myanmar...
MANDALAY INT’L TRADE FAIR & BUSINESS FORUM 2019 ပွဲအတွက် အချက်အလက်များကို www.mdyitfbf.com...
Written on 18/02/2019, 16:41
MANDALAY INT’L TRADE FAIR & BUSINESS FORUM 2019 မှ ကြိုဆိုပါတယ် အထက်မြန်မာနိုင်ငံရဲ့ စီးပွားရေးရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုဆိုင်ရာ...
Mandalay international Trade fair and business forum 2019 တွင် ပြခန်းများ ပါဝင်ပြသနိုင်ရန် ဖိတ်ကြားခြင်း